Keessummaa Bariisaa – Ethipian Press Agency
Keessummaan keenya har’aa Yunivarsitii Naannoo Oromiyaatti, Daarektara Inistiitiyuutii Qorannoo Afaan, Aadaafi Artii Oromoo ta’anii hojjechaa kan jiran Obbo Leeniin Quutoo Hamaadoo jedhamu. Obbo Leeniin qorattoota, gorsitootaafi barsiisota aadaa Oromoorratti hojiilee guguddoo hojjetaniifi...	Read more »
“Diinas waraanaa, egeree ummataatiif hojjechuu qabna” -Doktar Injinar Habtaamuu Ittafaa
Hoggansi ogummaa barbaada. Namni tokko tokko hoggansa yeroo gabaabaatiin bu’aa qabatamaa fiduun jaalalaafi kabaja ummatasaa biraa argata. Keessummaa Bariisaa maxxansa kanaas hayyuu yeroo gabaabaa keessatti seektaroota garagaraa hogganuun bu’aa qabatamaa fidaniifi wayita...	Read more »
“Fayyadamummaa qeerroo sirna kana dhiigasaan fidee , ammas tikfachaa jiruu mirkaneessuuf, hojjetaa jirra” -Obbo Addisuu Kabbadaa
Sirnoonni cunqursaa atseewwanii dhufanii darban marti ilmaan Oromoofi sabaafi sablammoota garagaraatti harqoota gabrummaa fe’uun maxxantummaan jiraachaa, gola lammiilee golgoleessaa abbaa lafaa lafasaarratti abbummaa dhabsiisuun maqaa ‘ciisanyaa’ jedhu itti moggaasuun saamaa qorqalbii eenyummaa...	Read more »
“Wayyaaneen kanaan booda lafa Oromoorra guyyaa takka buluu hindandeessu” -Obbo Shimallis Abdiisaa
Fuula Keessummaa Bariisaa torban kanaarratti, haala yeroo naannoo Oromiyaafi biyyaarratti ibsa bal’aa Pirezdaantiin Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kennan akka armaan gadiitti isiniif dhiheessineerra. Ummanni Oromoo ummata aadaa, duudhaa, seenaafi sirna ittiin bulmaataa...	Read more »
Keessummaan keenya har’aa hayyuu Siyaasaa Jaal Leencoo Lataa Waaqayyoo yoo ta’an, gaafdeebii dhimmoota wayitiifi kanneen biroorratti isaan waliin taasifne akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineera. Bariisaa: Bara, bakka dhalootaafi haala barnoota keessanii gabaabaatti...	Read more »
“Mariin biyyaalessaa ummattoota kallattii tokko qabsiisuuf taanaan gaariidha” Jaal Toleeraa Adabaa
Saamraawiit Girmaatiin Gaazexaan Bariisaa akkuma kanaan dura namoota ciccimoo muuxannoofi mudannoosaaniirraa baratamu dubbistootasaatiif dhiyeessaa ture maxxansa kanaanis nama gameessa, mirga Oromootiif waggoota dheeraaf of kennanii qabsaa’aniifi ammas qabsaa’aa jiraniidha. Keessummaan keenya Dubbi...	Read more »
“Injifannoo dhiigaan argame kana kunnunsinee guddisuu qabna”- Obbo Girmaa Taaffasaa
Girmaa Taaffasaa jedhama. Dhalate kan guddate Finfinnee, kutaa magaalaa Addis Katamaa, naannawa Hospitaala Amaanu’eel, ganda Gimiraa jedhamutti. Wayita umriinsaa ga’u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Phaawuloos jedhamu kan kutaa Magaalaa Gullalleetti argamutti kutaa...	Read more »
“Warraaqsa misooma barnootaa milkeessuuf sadarkaalee hundatti hojjechaa jirra” – Obbo Efreem Tasammaa
“Barnootaa; barnootaa ammas barnootaa kana ta’uu qaba kaayyoon Oromootaa” jedhe Artisti Alii Birraa, Lammiin barate mirgasaatiif falmuu biyyasaaf wabii; jireenyasaaf abdii ta’uu danda’a. Kun akka dhugoomuufimmoo kallattii mootummaan kaa’e hordofuun Biiroon Barnoota...	Read more »
“Paarlaamaa haaraan hirmaannaa hayyootaatiin seenaa haaraa galmeessiseera” – Pirofeesar Birhaanuu Borjee
Pirofeesar Birhaanuu Borjee Yunvarsiitii Hawaasaatti qorataa olaanaafi barsiisaa barattoota digrii 2fafi 3fa ykn PhDti. Yunvarsiitii Hawaasaatti dhaabbiidhaan tajaajila kennaa kan jiran Pirofeesar Birhaanuun, barattoota digrii 2fa ykn maastarsiifi digrii 3fa ykn PhD...	Read more »
“Baran jalqaba Abbaa Gadaa Tuulamaa ta’etti baay’inni namoota Hora Harsadeetti irreeffatanii kuma afur hincaalu ture” – Hayyuu Gadaa Tuulamaa Naggasaa Nagawoo
Keessummaan keenya maxxansa kanaa Hayyuu Gadaa Tuulamaa Naggasaa Nagawoo Badhaadhaati. Ayyaana Irreechaa baranaa sababeeffachuun gaafdeebii Gaazexaan Bariisaa dhimmoota gara garaarratti hayyuu kana waliin taasise akka armaan gadiitti dhiyaateera. Bariisaa: Bakka dhalootaa, haala...	Read more »